मनांगको विजयी शुरुआत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मनांगको विजयी शुरुआत
काठमाडाै‌ । सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले पल्सर सहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ । शुक्रबार भएको खेलमा ब्रिगेड ब्वाइजलाई ३-१ ले हराएर मनाङले विजयी सुरुवात गरेको हो ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मनाङले पुनरागमन जित निकालेको हो । मनाङको जितमा अफिज ओलावलेले दुई गोल गरे । यस्तै हेमन गुरुङको नाममा एक गोल रह्यो । ब्रिगेडका रजक तिवारीले एक गोल गरेका थिए ।
खेलमा सुरुवाती अग्रता अग्रता भने ब्रिगेडले लिएको थियो । पहिलो हाफको २८ औं मिनेटमा रजक तिवारीको गोलबाट ब्रिगेडले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो । तर, ४७ औं मिनेटमा हेमल गुरुङले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।
त्यसपछि मनाङको जितमा नायक बने अफ्रिकन खेलाडी ओलावले । खेलको ५७ औं मिनेटमा ओलावलेले गोल गर्दै मनाङलाई २ - १ को अग्रता दिलाए । खेलको इन्जुरी समयमा ओलावलेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मनाङलाई ३ - १ को जित दिलाए ।
जितसंगै मनाङले लिगको पहिलो खेलमा महत्वपूर्ण ३ अंक जोडेको छ । ब्रिगेडले भने अग्रता जोगाउन नसक्दा हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ ।
मनाङ र ब्रिगेडको खेलसंगै जारी 'ए' डिभिजन लिगको पहिलो चरणको खेल सकिएको छ ।